Okusha & Eco-friendly TPE Material: Umugqa we-TPE yoga wenziwe nge-TPE ethuthukisiwe kwezobuchwepheshe (i-Thermoplastic Elastomers), okuyimodulus ephansi ngokuvamile, izinto eziguquguqukayo ezingalulwa ziphindaphindwe zinikeze ukuqina okuphezulu. I-TPE inobungani kakhulu futhi iyindlela entsha yamata we-yoga.
Grippy hhayi Slippy: Umugqa we-TPE yoga unezindawo ezingasheleli ezinamacala amabili ukuze ukwazi ukwenza noma yikuphi ukunyakaza ngokuzethemba. Ngaphansi kweWavy kubambelela phansi. Indawo ebhalwe ngobuqili ivimbela izandla nezinyawo ekuphumeni endaweni ukuze ukwazi ukubamba noma ngabe umkhuba wakho uthola amandla kangakanani.
Ubufakazi bamanzi futhi kulula ukuwahlanza: Ihlolwe yaqinisekiswa yi-INTERTEK ne-SGS, lo makhi awunayo i-PVC, i-latex, futhi ngokuqinisekile ngeke ihlasele izinzwa zakho nganoma iyiphi iphunga. Ingaphezulu leseli elivalekile likhiya uthuli nomswakama ukugcina umjuluko nephunga likhona. Kulula ukusula kuhlanzekile.
Osayizi Iyatholakala: Singanikeza ngobukhulu obujwayelekile, njengo-173 * 61 * 0.6cm, 173 * 80 * 0.6cm, 183 * 61c * 0.6cm, 183 * 80 * 0.6cm. Ngaphezu kwalokho, sinesevisi yangokwezifiso, ngakho-ke ungakhetha abanye osayizi obafunayo.
Izinto ze-Premium: Umata we-Engine TPE Yoga othuthukisiwe wenziwa ngezinto ezibonakalayo ze-premium TPE. Kubiza okwengeziwe ukwenza, kepha kuyakufanelekela uma uyiqhathanisa nemata yendabuko ye-PVC, NBR ne-EVA. Izinto ze-TPE zinikeza ukuthuthuka kwakamuva kwezobuchwepheshe ngaphezu kwamata omdabu we-yoga.
Umklamo We-Anti-Skid Othuthukisiwe：I-TPE yoga mat yathuthukisiwe ngokuthungwa okungasheleli. Ukuthungwa okunamathelayo emaceleni emabili kunikela ngokudonsa okuhle nokubamba okuphezulu, ngaphandle kokudela ukunethezeka. Kuhle kakhulu ukuqhuba izinhlobo eziningi ze-yoga. Isiliphu esingezansi phansi, ngamapulangwe, phansi kasimende.
Ubukhulu bokuzikhethela: Singakhipha noma yikuphi ukushuba okufunayo: kusuka ku-3mm kuye ku-12mm.
Lokhu kushuba kwamata we-TPE yoga kuqinisekisiwe ukuhlinzeka ngezinga eliphelele lokugwedla nokuvikelwa kwamalunga akho namadolo ngenkathi kukuvumela ukuthi ubambe phansi ibhalansi.
I-ultra-wide ab roller enokumelana okwakhelwe ngaphakathi nezibambo ze-ergonomic ukusiza ukukhulisa imiphumela yokuzivocavoca kwe-ab
Injini ye-kinetic yangaphakathi isebenzisa intwasahlobo yensimbi yekhabhoni ukuhlinzeka ukumelana nokukhulisa ukuzivocavoca isisu nengalo
Ukunyathela kwesondo okubanzi kakhulu kunikeza ukuzinza lapho kuqoshwa kwesobunxele, kwesokudla noma enkabeni yomsebenzi oqondisiwe kuma-oblique
Izandla ze-ergonomic ziboshwe ngama-angled ukuze kusebenze imisipha yengalo nengaphakathi; izibambo ziyasuswa ukuze kugcinwe kalula futhi kuthuthwe
Kufaka i-high-density foam kneepad ukuze uthole induduzo ephezulu.
Ama-kettlebells aqinile ayinsimbi eyodwa futhi ifaka ukubamba okulula, isibambo sesitayela sakudala futhi unengubo eqinile yeNeoprene
I-neoprene kettle bell Exercise Weights ilungele ukwakha imisipha nokuqina.
Iza ngemibala yesimanjemanje eyingqayizivele kakhulu, ikhethe usayizi wesisindo, Wonke usayizi wesisindo unombala ohlukile
Njalo iketela limakwe ngokusobala ngosayizi wesisindo ukwenza kube lula ukubona usayizi wesisindo
Ukufakwa kwe-Neoprene: ukuvikela i-flooring ukuthi ingaklwebheki, noma uma kwenzeka ulahla i-kettle-bell
Okunhlobonhlobo: Ama-dumbbells anikeza amandla okukhomba amaqembu emisipha ethile noma ukuthola ukuzivocavoca umzimba okugcwele
Shisa ama-calories futhi wakhe imisipha ngokuqina kwesisindo okuqinile kanye ne-cardio.
I-Non Slip-Grip Design: Ukumbozwa kwempahla ye-Premium kuyenza ibe mnene futhi ibambe ezandleni futhi inikeze ukuvikelwa kuma-calluses.
Ilungele ukuzivocavoca umzimba: ukuma okuhlukile kwe-HEX kuvimbela ukugoqa futhi kulula ukustaka Ikakhulukazi izinhlelo zasekhaya zokuzivocavoca.
I-iron yensimbi eqinile: yenziwe ngekhwalithi ephezulu yensimbi yokuqinisa ukuqina, ukuqina nokuqina. IFirm Construction ngeke yephule noma igobe ngemuva kokuyisebenzisa kaninginingi.
Ukhokho + TPE Yoga Mat
Izinto Ezisimeme Eziyi-100%: Umata we-yoga ongasheleli uqukethe indawo ekhokho yemvelo kanye ne-TPE engaphansi. Isikidi se-yoga sikakhokho asiqukethe i-PVC, i-latex noma ama-plasticizers.
I-Eco Yoga Mat: I-yoga mat cork engenabuthi iyindlela ehlukile futhi inikezela ngokuzwelana nakho konke okwemvelo kwe-yoga mat ngokusebenzisa umgqomo wekhokho ozinzile kanye nokusekelwa kwe-TPE engasindi. Qeqesha ngesitayela, zizwe uqine futhi ume umude kumata.
Ukhokho Ophezulu: U-5mm u-yoga mat ogqamile ufaka ibhantshi elingasheleleki likakhokho ngenhloso yokubamba eyomile esiza ibhalansi nokuzinza, kanye ne-yoga mat TPE ukwesekwa kwempahla yenjoloba yemvelo kusiza ukubamba kakhulu noma iyiphi indawo yaphansi.
Ukusekelwa kwe-TPE: I-yoga mat ewugqinsi eyengeziwe inesibindi futhi inesibindi ngomsele we-ridge oqoshiwe osiza lo mbhede we-yoga ukwakha isisekelo sokuthi uhambe ngesitayela nenhloso, ngaphandle kokwesaba ukushibilika noma ukushibilika ngenkathi uzijwayeza.
Uhlala womile futhi uhlanzekile: Yonke ibhodi likakhokho wemvelo lifaka ukwakheka kweseli okuvaliwe okungukuthi futhi okusebenzayo ukuxosha umswakama nokuvala ukungcola nephunga lokugcina ukhokho wakho wokuzivocavoca ukhokho womile futhi unuka kamnandi ngendlela efanele nangokuqondanisa.
Osayizi Iyatholakala: Ama-sizs ethu avamile angama-183 * 61 * 0.4cm, 183 * 61 * 0.5cm, 183 * 68 * 0.4cm, 183 * 68 * 0.5cm. Ngaphezu kwalokho, ungenza ngezifiso usayizi owufunayo.
Umthamo omuhle wokuthwebula: I-PE foam board inezici zokuzivumelanisa nezimo, isisindo esincane nokuqina, ngakho-ke ingamunca futhi isakaze amandla wethonya langaphandle ngokugobaUbufakazi obungenamanzi nobumswakama: Ibhodi le-foam le-PE lenziwe ngezinto ze-foam ezinamabhamuza azimele, ngakho-ke cishe akukho okubamba amanzi okungangeni amanzi, futhi akuthinteki yizimo zezulu.
Usayizi Iyatholakala, ukushuba kanye kwabantu:Ubuningi kusuka ku-19kg / m³ ukuze 120kg / m³ ayatholakala.
1. Ipuleti elihlangene lokunwetshwa elihlangene lomgwaqo okhonkolo;
2. Ibhuloho lokumisa amanzi ngokuhlanganyela;
3. Iphrojekthi yokulondolozwa kwamanzi, idamu lokuphikisa, nokuvikelwa kwemithambeka;
4. Ipuleti lokumisa amanzi elihlangene ngenzansi kwamanzi nogesi, nombhoshongo wamanzi;
5. Okwesitshalo samanzi sempilo, indawo yokuhlanza indle;
6. Okwetheku, isikhumulo semikhumbi nokhonkolo;
7. Ngomhubhe wamanzi;
8. Okomgwaqo omkhulu ongaphansi komhlaba.